Nke a bụ igwe dị mma maka akara laser nke isiokwu nwere nnukwu akụkụ yana ụdị dị iche iche na mgbagwoju anya.
High rigidity na nkenke na-ekwe nkwa site ya Ọdịdị kpamkpam mere welded, agbatị na milled ígwè, ohere maka ije na ndị ọzọ mma na loading nke isiokwu.
Nameplate Laser akara Machine BL-PFP30A
Ebe ọ bụ na arụpụta ọrụ bụ otu ihe dị mkpa nke ndị na-emepụta mkpado, anyị mepụtara usoro nke na-enye ohere njikwa dị mfe nke ihe osise laser, iji belata ọrụ onye ọrụ iji rụọ ọrụ ahụ. Isi ihe mkpado bụ aluminom na igwe anaghị agba nchara.
A na-ejikarị ya eme ihe na kọntaktị kọntaktị, ngwa kọmputa, ihe eji emepụta ụlọ ọrụ, elekere, kọmputa na nkwukọrịta, akụkụ aerospace, akụkụ akpaaka, ngwa ụlọ, akụrụngwa ngwaike, ebu, waya na eriri, nchịkọta nri, ọla, eserese na akara ederede na ụtaba na agha , na arụmọrụ na -emepụta ahịrị
ọtụtụ-eji na electronic mmiri, ngwaike, eletriki ụlọ ọrụ, kwa ụbọchị n'ji ngwongwo, sensọ, akpaaka akụkụ, 3C electronic, crafts, nkenke ngwa, onyinye na ihe ịchọ mma, ọgwụ equipments, elu-ala-voltaji ngwa, ụlọ ịwụ ngwa, ụlọ ọrụ batrị, IT ụlọ ọrụ , wdg
Desktop Fiber Laser akara Machine BL-DMF20A
Ọ na ọtụtụ-eji uwe ngwa, akpụkpọ anụ, nri onunu nkwakọ, electronic mmiri, crafts nhazi, iko nkume nhazi, na ndị ọzọ na ebe ndịna na ederede marking na ọnwụ. A na-ejikwa ya n'ọtụtụ ihe ndị na-abụghị nke ọla, dị ka nkwakọ ngwaahịa akwụkwọ, ngwaahịa plastik, aha mmado, akwa akpụkpọ anụ, seramiiki iko, plastik resin, ngwaahịa osisi, mbadamba PCB, wdg.
Tumadi etinyere na elu ọgwụgwụ ahịa nke àjà ihe ọ -ụ -ụ-mma nhazi, ọgwụ ọjọọ, ntecha, videos na n'elu-akanye nke ọzọ polima ihe nkwakọ karama, nke dị elu karịa ink-ebi akwụkwọ na-enweghị mmetọ; akara mbadamba PCB na-agbanwe agbanwe; nhazi micro pores na oghere kpuru ìsì na silicon wafers; marking LCD mmiri mmiri kristal iko QR code, punching n'elu glassware; akara na mkpuchi mkpuchi ígwè, bọtịnụ plastik, ihe eletrọniki, akụrụngwa nkwukọrịta, ihe ụlọ, wdg
Nchọpụta ngwaahịa abụrụla ihe dị oke mkpa na ụlọ ọrụ ụgbọ ala, ebe ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe ụgbọ si na ndị na-eweta ngwaahịa dị iche iche.
Idebe nnukwu usoro ọkọnọ na-achịkwa dị ezigbo mkpa iji nwekwuo arụ ọrụ ma belata ọnụahịa. Ya mere, akụrụngwa akụrụngwa na-ebu koodu NJ, nke nwere ike ịbụ Barcode, Qrcode, ma ọ bụ DataMatrix. Koodu ndị a na-enye gị ohere ịchọpụta onye nrụpụta na ụbọchị na ebe emepụtara ihe mejupụtara ya. N'ụzọ dị otú a, ọ dịkarịrị mfe ijikwa nsogbu ọ bụla na-adịghị arụ ọrụ, si otú ahụ na-ebelata ihe ize ndụ nke njehie.
BOLN ahaziri akara sọftụwia site na koodu niile - ụdị, nke na-agbaso ụkpụrụ ọkọlọtọ. Anyị na-echekwa software ngwanrọ maka mmekọrịta na ụlọ ọrụ nchekwa data ma ọ bụ onye nlekọta akara. Ọzọkwa, enwere ike ịwepụta ngwanrọ ahụ maka arụmọrụ na-echetara na akpaghị aka dabere na koodu akara agụ.
Akpan iji akara turbocharger volutes, nyochaa ogo koodu ma mepụta nyocha mmiri na mmiri. Igwe ahụ kwesiri ịbanye na mmepụta na ihu yana nchekwa data nke ndị ahịa.
Akpan na-eji laser marking DataMatrix Koodu na eriri ederede na nkedo anwụ, yana sistemụ arụmọrụ dị elu nke nwere ike ịrụ ọrụ na robots ma nyochaa ogo mgbe akara akara.
A na-etinye igwe ahụkarị iji kaa profaịlụ aluminom na akara, jikọtara ya na oke mmepụta igwe. Ogologo ngwaahịa a bụ ihe dị ka mita 3.1, akara maka 5mm ọ bụla. Usoro mmepụta ihe dị ihe dị ka mita 3 ruo 5 kwa nkeji.